काठमाण्डाै उपत्यकामा अब कुन वार कुन पसल खाेल्न पाइन्छ ? (आदेशसहित) | प्रमुख समाचार
June 20, 2021 NepstokLeaveaComment on काठमाण्डाै उपत्यकामा अब कुन वार कुन पसल खाेल्न पाइन्छ ? (आदेशसहित)
काठमाण्डाै – काठमाण्डौ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै एक हप्ता लम्बिएको छ । काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञा असार १४ गते राति १२ बजेसम्म थप्ने निर्णय गरेको हो । निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै थप गरेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक गाडी आउँदो १४ गते रातिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटीसहित निजी गाडी जोर–बिजोर चल्न पाउने भएका छन्। कार, जीप, भ्यानमा बढीमा चार जना, ट्याक्सीमा बढीमा तीन जना हुनुपर्नेछ ।